1. Akụrụngwa na-enye ma ụtọ na ụtọ uto Enwere ike ịme ha ka ha bụrụ nri mbinye aka nke mmadụ niile ga-ahụ n'anya, dị ka spaghetti, salad, ma ọ bụ dị ka nri ụtụtụ obi. Karịsịa na njedebe nke afọ Ndị na-aga oriri na nkwari n'ụlọ Taa, anyị nwere usoro iji mee ka anụ ezi na-eji oven iji tinye agwakọta, na-atọ ụtọ ma na-esi ísì ụtọ n'ụlọ atọ, ụlọ asatọ. Site na menu juputara na protein na abụba iji nwee ihu igwe dị jụụ, jiri oven dị mfe iji nweta nri ma ọ bụ ihe oriri ga-eso isi.
2. Kedu ihe bụ anụ ezi? Ọtụtụ ndị mmadụ amabeghị !! N'ihi na a na-esi n'ime afọ anụ ezi eme anụ ezi Ma etinyere ya mgbe salting ma hapụ oge. Akpọrọ ma ọ bụ tinye ya na nchekwa nri iji nọgide na-eri ogologo oge. Naanị mmiri, nnu, shuga, sodium nitrite na sodium ascorbate bụ usoro nchekwa usoro eji arụpụta anụ aromatic. Jikwaa okpomọkụ ma hapụ ya ruo mgbe ọ dị Akụrụngwa eji eme anụ ezi • Anụ ezi anụ ezi • Efere maka anụ ezi na-eguzogide ọkụ • Oku
3. Debe mpekere anụ ezi na efere ma ọ bụ ite mgbochi. Site na imeghe anụ ezi ahụ ka anụ wee apịaji ma ọ bụ machie ibe ya Iji nweta okpomọkụ n'ime efere niile Enwere ike itinye ya na aluminium aluminom eji esi nri. Maka nhicha dị mfe
4. • Tinye efere anụ ezi a kwadebere na oven. Mgbe ahụ dozie ọnọdụ okpomọkụ na 205 •. • Bichaa anụ ezi ahụ n'akụkụ nke mbụ maka minit 12-15. • Gbanye anụ ezi ahụ n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe ahụ, tinye na oven maka otu oge
5. Ọ dị mma, mara mma, wepụ ka ịhazi efere ahụ
6. A na-eri nri na-atọ ụtọ nke na-eji anụ ezi na oven n'ụzọ zuru oke ma dịkwa mfe enwere ike iri ya dị ka agụụ na-enweghị ihe ọ bụla n'ihi nnu nnu, mmanụ, ụtọ dị ụtọ na isi nke osisi sitere na anwụrụ ọkụ. Ọ bụ nnukwu agụụ. Ha na-etinye ya na achịcha, chiiz na akwụkwọ nri ha hụrụ n’anya bụ anụ ọkụ Vanwich nke ụmụaka agaghị echefu. Tinye ya n’ime salad inine tinye cheese, ọ bụ nke Siza, nri nke na-atọ gị ụtọ. Wụsaa spaghetti carbonala Ọ na-agbakwunye ịdị nro na nri onye ọ bụla masịrị ya nke ka mma.Ma, anụ ezi bụ nri nwere abụba dị elu. Iri oke na-aba uru maka ahụ. Mana iri oke nri Ga-enwe mmetụta na-adịghị mma Ka anyi mee nri di uto N'ime afọ nke ụkpụrụ ahụ, site na usoro anụ ezi a na-eme ọkụ, nke na-esi ísì ụtọ na-agbasa, na-agbakwunye ncheta na ncheta ezumike.